अष्ट्रेलिया, बेलायत र वेल्ससँगका समझदारीले नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलार्इ फाइदा पुग्नेछ |
अन्तवार्ता आइतबार, १६ माघ, २०७३
-महेश खनाल, अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था अाइक्यान वि.स. २०५३ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टे्स संस्था ऐन २०५३ द्वारा स्थापित स्वायत्त नियमनकारी निकाय हो । राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखा ब्यवसायलाई नियमन गर्नु तथा लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
यसले नेपालमै प्रथम पटक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको प्रथम दीक्षान्त समारोह अायोजना गर्दैछ । यसै सेरोफेरोमा उक्त दीक्षान्त तथा नेपालमा चार्टड एकाउन्टेन्सी सम्भावना र अवसरलगायतमा विषयमा केन्द्रित रही हामीले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष महेश खनालसँगको कुराकानी
आइक्यान कस्तो संस्था हो ?
आइक्यान नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको लेखा व्यावसायीहरुको नियमन गर्ने नियमनकारी निकाय हो । यसको प्रमुख काम भनेको चार्टर एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्ने, जो चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्ने र सदस्यता लिइसकेपछि जो यो ब्यवसायमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलार्इ सर्टिफिकेट अफ प्रयाक्टिस प्रदान गर्ने र उहाँहरुले गरेका कार्यहरुलाई नियमन गर्ने पनि अधिकार यसै ऐन भित्र आइक्यानलाई छ।
ब्यवसायिक र क्वालिफिकेशनका हिसाबले हेर्दा उच्च श्रेणीमा पर्ने चार्टर एकाउन्ट विषय डाक्टर ,इन्जिनियर जतिकै रुपमा चर्चा नपाएको हो ? चार्टर एकाउन्ट कस्ता विद्यार्थीहरुले चार्टर एकाउन्टेन्ट विषय रोज्न सक्छ्न ?
नेपाली परिबेशमा यसको पढाइको सुरुवात डाक्टर, इन्जिनियरको पढाइभन्दा धेरैपछि सुरु भएको हो । यो शिक्षाको सम्बन्ध सिधा रुपमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग छ। जब मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुँदै जान्छ, तब चार्टर एकाउन्टेन्ट जस्तो जनशक्तिको आवश्यकता पर्दै जान्छ त्यसैले आम जनतामा लेखा ब्यबसायीको महत्त्व रहन्छ।
एउटा विद्यार्थीलाई सक्षम चार्टर एकाउन्टेन्ट बनाउन आइक्यानको भूमिका कुन कुन स्थानमा कसरी रहन्छ ?
विद्यार्थीहरुलाइ हामी दुई तरिकाबाट छ्नोट गर्ने प्रक्रिया बनाएका छौ। टेन प्लस टु सकिएका विद्यार्थीहरुले क्याप वान पास गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यसपछि क्याप टु र क्याप थ्री पास गर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को स्नातकमा ५० अंक ल्यार्इ उतीर्ण भएकाले सिधा भर्ना पाउने प्राबधान छ र क्याप टु र क्याप थ्री पास गरिसकेपछि चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्न सक्नुहुन्छ । क्याप थ्रीमा विद्यार्थीहरुले सक्षम चार्टर एकाउन्टेन्टसँग तीन बर्ष सिक्ने अवसर प्राप्त गर्ने छ्न यो हाम्रो शिक्षाको राम्रो पक्ष हो।
आइक्यानले चार्टर एकाउन्टेन्सीको फेज फराकिलो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो मेम्बर सीपको लागि भुमिका खेलिरहेको छ ?
हामीले आइक्यानबाट गत वर्ष नै सिपी अष्ट्रेलियासँग मेम्बरसीप पाथवे एग्रिमेण्ट लिएका छौ । अब नेपालबाट सिए पास गरेर अष्ट्रेलिया गएका बिद्यार्थीहरुले दुई वटा तह पास गर्ने बितिकै यो एग्रिमेण्ट लिन सक्ने छन । त्यस्तै बेलायत एण्ड वेल्सको पनि मेम्बर सिप लिन सक्नेछ्न र हामी चाडै नै क्यानडाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौ । त्यसैले हाम्रो शिक्षा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठाउँ बनाउन सफल भैसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिएको मान्यता पाईसकेको ब्यक्ति नेपालमा पेशागत रुपमा अघि बढन के – कस्तो प्रक्रिया हुन्छ ?
कुनै पनि राष्ट्रबाट अध्ययन सकेर आउने बितिकै हाम्रो सदस्ता प्राप्त गर्न सक्दैन । हामीले भारतबाट पास भएर आएका विद्यार्थीहरुलार्इ यहाँ कानुन र कर सम्बन्धी विषय उतीर्ण गरेपछि चाहिँ सदस्यता प्रदान गरिरहेका छौ । तर भारतले चाहिँ नेपालबाट उतीर्ण भएर गएकाहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्ने गरेको पाइएको छैन । त्यसैले अहिले एकोहोरो प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ । हामी सकेसम्म दोहोरो प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौ । अझै पनि भारतमा १० देखि १५ विद्यार्थी सिए अध्ययन गरिरहेका छन।
नेपालमा नै सिए शिक्षा अध्ययन गर्ने सकिने ब्यबस्था हुँदा पनि किन बिदेश गएर पढ्नु परिरहेको छ ?
हामीले करियर काउन्सिल सुरु गरिसकेका छौ । हाम्रो टिमले टेन प्लस टु अध्यापन गराइरहेका संस्थाहरुमा गएर काउन्सिलिङ गर्ने गरेको छ। नेपाल मै सिए शिक्षा लिन सकिने छ र अरु शिक्षाभन्दा सस्तो र सुलभ पनि छ । तीन वर्षको अध्ययन समय अवधिमा विद्यार्थीहरुले तिर्ने शुल्क भनेको एक लाखभन्दा कम छ र मागको कुरा हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रमा पनि माग बढी भइरहेको छ । अहिले निजि क्षेत्रमा मात्र देखिएता पनि यस्को क्षेत्र बृहत छ।
विद्यार्थीहरु पास गर्न नसक्ने भन्ने भयले बढी ग्रसित हुने गरेका छन नि हगि ?
त्यस्तो होइन, हामी पुरा उतीर्ण भइसकेका बिद्यार्थीहरुलार्इ मात्रै सर्टिफिकेट प्रदान गर्न सक्षम रहन्छौ । कतिपय कार्यरत ब्यक्तिहरुलार्इ हामी सिधै सदस्यता प्रदान गर्न सक्दैनौं जबकी तिनीहरु सक्षम हुन्छन काम गर्न यदि ऐन बन्यो भने त्यो बीचको स्तरको पनि सर्टिफिकेट दिन्छौ।
आउदो मंगलबार आइक्यानले आयोजना गरेको दीक्षान्त समारोह कस्तो कार्यक्रम हो?
अहिले सम्म दिक्षान्त कार्यक्रम भएको छैन, यो पहिलो पटक हो । नेपालबाट सीए उतीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाइ सम्मान गर्ने उधश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको प्रमुख अथितीमा रास्ट्रपति बिद्यादेवि भण्डारी हुनुहुनेछ। जम्मा २२० जना विद्यार्थीहरुलाइ गरिने सम्मानले गर्दा सीए विषयलाई नजिक बाट परिचीत हुने अवसर पनि मिल्ने बिश्वास गरेका छौ।
चार्टर्ड एकाउन्ट अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी एबम अभिभावकहरुलाइ के भन्न चाहनुहुन्छ?
विषय पास गर्न अलिकति गार्हो छ ५० प्रतिशतभन्दा कम अक आउँदा पास हुदैन । तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाइ गार्हो छैन।त्यसैले राम्रो सङ पढ्नुपर्छ गाह्रो छैन ।